Siyakwamukela Umlayezo Izifundo ezivela imeyili Ochwepheshe | Martech Zone
NgoLwesithathu, Januwari 2, 2019 NgoLwesithathu, Januwari 2, 2019 UKC Karnes
Umlayezo wokwamukela ungaqale ubonakale ungasho lutho njengoba abathengisi abaningi bengacabanga uma ikhasimende selibhalisile, itayitela selenziwe futhi baqinisekiswa endimeni yabo. Njengabakhangisi, noma kunjalo, kungumsebenzi wethu ukuqondisa abasebenzisi ngokusebenzisa i- konke isipiliyoni nenkampani, ngenhloso yokwazisa okwanda njalo inani lempilo yekhasimende.
Esinye sezici ezibaluleke kakhulu zesipiliyoni somsebenzisi umbono wokuqala. Lo mbono wokuqala ungabeka okulindelwe futhi uma kungasebenzi kahle, amakhasimende anganquma ukuqeda uhambo lwawo khona lapho.
Izinkampani eziningi zehluleka ukwamukela ukuthi kubaluleke kangakanani ukugibela ebhodini. Ukwehluleka ukufundisa abasebenzisi bezindawo eziningi inkampani engazinikeza inani kungachaza inhlekelele yekusasa lenkampani. Umlayezo wokwamukela kungaba isipuni sesiliva sokondla amakhasimende lolu lwazi olubalulekile.
Ngakho-ke, yiziphi izingxenye zomkhankaso wemiyalezo yokwamukela ngempumelelo? Kusukela ekutadisheni izinkampani ezisebenzisa ngempumelelo abasebenzisi esikalini ngemikhankaso yazo yemiyalezo eyamukelekile, kunezindikimba ezivamile:
Thumela ngekheli le-imeyili lomuntu.
Yenza ngokwezifiso umugqa wesihloko negama lomamukeli.
Chaza lokho amakhasimende angakulindela ngokulandelayo.
Nikeza okuqukethwe kwamahhala nezinsizakusebenza kanye nezaphulelo.
Thuthukisa ukumaketha kokudluliselwa.
Ukusebenzisa lawa macebo ngaphakathi kwemiyalezo yakho yokwamukela i-imeyili kungasiza ukukhuphula amazinga wokuchofoza nokuzibandakanya. Ukwenza ngezifiso kuma-imeyili kukodwa kutholakele ukukhuphula amanani avulekile ngo- 26%.
Omunye umkhuba othakazelisayo ku-imeyili ukuhlinzeka ngokugqwayiza kokuhamba ngaphakathi kokubukwayo ukuze uhehe iso ngokushesha futhi uligcine lisebenza. Ama-GIF, ngokwesibonelo, ahlinzeka ngozimele abambalwa kuphela abagcina usayizi wefayela omncane futhi uvumela ama-imeyili e-HTML ukugcina isivinini sokulayisha esisheshayo.
Ukumaketha kokudluliselwa sekube okunye ukufakwa okuhle ngaphakathi komyalezo owamukelekile wokuthuthukisa ibhizinisi ngomlomo. Lapho ikhasimende labelana ngokubhalisa noma ukuthenga kwalo kwakamuva nomngani kungaba iqhinga lokuguqula elinamandla kakhulu, yingakho i-imeyili yokuqala iyisikhathi esihle sokutshala le mbewu. Elinye lamasu angcono kakhulu wokukhuthaza ukumaketha okuphumelelayo kokudlulisa ukunikela okuzinhlangothi ezimbili. Lokhu kunikeza kokubili ikhasimende elabelanayo nomamukeli walo inkuthazo yokwenza ngokuthunyelwa.
Usebenzisa amasu afana nalawa nokuningi kwe- imikhankaso yemiyalezo eyamukelekile ye-imeyili kungasiza ukukhuthaza ukungena ebhodini komsebenzisi okunempilo kanye nesipiliyoni esihle samakhasimende. Sebenzisa okubukwayo ngezansi kusuka kuCleverTap ukuqondisa isu lakho lemiyalezo yokwamukela.
Tags: ukwenza ngezifiso i-imeyiliamathiphu omyalezoonboarding umyalezo we-imeyiliumyalezo wokugibelaukumaketha kokudluliselwaumlayezo owamukelekile
U-KC Karnes ungusomaqhinga owaziwayo wokumaketha nosomabhizinisi obhekele ukukhulisa ezinye zezinkampani ezishisa kakhulu zobuchwepheshe eSilicon Valley, kufaka phakathi iCleverTap, i-Intelligent Ipulatifomu Yokukhangisa Kwamaselula.